निर्मला पन्तहरु र शक्तिशाली सरकार::Online News Portal from State No. 4
निर्मला पन्तहरु र शक्तिशाली सरकार
कंचनपुरकी १३ बर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पनि झण्डै ३ महिना पूरा हुन लागि सक्यो । देशमा शक्तिशाली बामपन्थी सरकार कुर्सीमा बिराजमान छ । ३ महिना बित्दा समेत एकजना बलात्कार गर्ने मान्छे खोजेर कार्वाही गर्ने हैसियत नराख्ने भएपछि इतिहासमै शक्तिशाली सरकार भन्ने कुरा ‘नमच्चिने पिङको सय झड्का’ भन्ने नेपाली उखान अहिले ठ्याक्कै मेल खान्छ । ‘काम कुरा एकतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली सरकार त्यो पनि चानचुने हैन पुरै दुई तिहाइको । यस्तो सरकार भएको बेलामा नेपाली जनताले सामान्य न्याय पाउन सक्दैन भने अनि कसरी यसलाई शक्तिशाली सरकार हो भनेर बिश्वास गर्ने । एकजना बालिका दिउँसै हराउँछ, खोजबिन गरिदिन प्रहरी समक्ष अनुरोध गर्दा केही सुनुवाई हुदैन, भोलिपल्ट बालिका बलात्कारपछि हत्या भएको अबस्थामा भेटिन्छ । प्रहरी प्रशासनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्नेमा उल्टै भएको प्रमाण नष्ट गर्ने काम गर्छ । देशमा दिनहुँ दर्जनौं निर्मलाहरू बलात्कार हुन्छन् सरकार मात्रै सरकारको रूपमा देखिन्छ ।
अहिलेसम्म आफुलाई सरकार हो भनेर भन्ने एउटा पनि काम सरकारले गरेर नेपाली जनतालाई देखाउन सकेको छैन । अहिले एकजना बलात्कारी जोगाउन प्रहरी प्रशासन पुरै शक्तिका साथ लागेको छ । यतिबेला निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड नेपालको दरबार हत्याकाण्ड भन्दा पनि रहस्यमय बन्दै जान थालेको छ । निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड राम्रोसँग छानबिन हुन नसक्नुको कारण के हो यसबारे सरकार मौन छ । निर्मला पन्त बम दिदीबहिनीको घरमा जान्छु भनेर गएको त्यसको भोलिपल्ट बलात्कारपछि मृत फेला परेपछि सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान अनिता बम र बबिता बमसंग गर्नुपर्नेमा त्यो नगरीकन अनेक खालको नाटक मञ्चन गरेर एकजना मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मान्छेलाई बलात्कारी र हत्यारा भनेर सार्वजनिक गर्नु प्रहरीको खेल छताछुल्ल भएको भएको छ । छानबिन समिति बनाउने काम भयो मात्रै त्यसले पनि मात्रै कर्मकाण्डे काम भन्दा अर्को केही गर्न सकेन । छानबिन समितिका सदस्य बीरेन्द्र केसीले छानबिन प्रतिबेदन भने जस्तो नआउने भनेर जुन कुरा भनेका थिए हुन पनि त्यहीँ नै भयो । अहिले गृहले कंचनपुरका निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इनेक्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ । यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर निर्मला पन्तको बलात्कार गर्ने दोषी को हो, किन एसपी लगायतका प्रहरी शक्ति त्यसको लागि बलिको बोका बन्न तयार भए अहिलेको प्रमुख कुरा यो हो । देशमा बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गरेर कार्वाही गर्ने हैसियत राख्न नसक्ने सरकार नेपाली जनतालाई किन चाहियो ? अहिले एकजना बलात्कारी सरकार भन्दा शक्तिशाली रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको बिषयमा विवादास्पद बम दिदीबहिनीलाई पुरै बोकेर जनतासंग सिधा कुरामा जवाफ दिनु भएपछि धेरैले यसलाई नकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित भइसकेको निर्मला हत्याकाण्डबारे जुन अभिब्यक्ति दिनुभयो त्यो कसैलाई पनि चित्तबुझ्दो छैन । जब प्रधानमन्त्रीले बम दिदीबहिनीलाई बोकेर मिडियाबाट बोलेपछि कसले छुने कसले बयान लिने हैसियत राख्छ कुरा स्पष्ट छ । साँच्चै निर्मलाको हत्याकाण्डलाई सार्वजनिक गर्ने होभने सरकार धरापमा पर्न सक्ने देखियो । जसरी हुन्छ आलताल गर्ने हलहल गरेर दिन बिताउने अनि आन्दोलनलाई मर्थर पार्ने भन्दा अर्को केही देखिदैन ।
हो हिजो दासढुंगा हत्याकाण्डमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युु हुँदा प्रमुख घटनासंग सरोकार राख्ने ड्राइभर अमर लामालाई सामान्य दोषि नदेख्नु परिवारको सदस्य भएको भनेर बखान गरेको कुरा यतिबेला एकपटक फेरि स्मरणमा आएको छ । साँच्चै घटना जहाँ जसको कारणले भएको छ त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले हेर्न नचाहनु अनि मात्रै नाटक मंचन गर्न किन सरकारी ढुकुटी सकेर हिड्नु पर्ने नेपाली जनताको प्रश्न हो यो । हिजो जसरी मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याकाण्डबारे केही कुरा आउन नसकी त्यसै गुपचुप भयो अहिले निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड पनि सानोतिनो चोटले हत्यारा बाहिर आउने कार्वाही हुने छातकाट छैन । हिजो ३३ केजी सुन काण्डमा प्रमुख योजनाकार चुडामणि उप्रेती गोरे हो भनेर प्रचारप्रसार गरियो पछि गोरे फेला परे तर अहिले एकपछि अर्को सुन काण्डमा काम गर्ने मतियारहरू रिहाइ हुदै गइरहेका छन् । अहिले नेपाली जनताले बर्तमान सरकारले केही परिवर्तनको काम गर्छ देशमा सुधार हुन्छ भनेर बिश्वास गर्न छोडिसक्यो ।
हो निर्मला प्रकरण पनि त्यसैको नयाँ श्रृङखला मात्रै हो अहिले दुई तिहाइको सरकार मात्रै नाम मात्रको हो यसको कुनै हैसियत छैन भन्ने कुरा ७ महिनाको काम गतिविधिबाट स्पष्ट भइसकेको छ । ५ महिनाभित्र १३०० भन्दा बढी बलात्कार हुनुलाई यो सरकारको सफलता मान्नुपर्छ । एकपटक संसदमा माननीय सांसद शशी श्रेष्ठले अहिले बामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउन योजनाबद्व रूपमा गाउँ–गाउँमा बलात्कारको घटना घटाइएको भन्ने जुन अभिब्यक्ती दिएका थिए अहिलेसम्म त्यो कुरा भने पुष्टि हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बलात्कार गर्ने अपराधीले मैले राष्ट्रबादी बामपन्थी सरकार असफल बनाउन बलात्कार गरेको हो भनेर बयान दिएका छैनन् । ताइनतुइका कुरा गरेर सरकारको समर्थन गर्नुको केही अर्थ छैन । देशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ, कुन कुनामा बसेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । मानी लिउ देश प्रतिपक्ष बिहिन छ भन्दापनि फरक पर्दैन ।
अहिले दिनहुँ निर्मलाहरू बलात्कारको शिकार बनिरहेका छन् प्रहरी प्रशासन घटनाको जानकारी लिने अनि जिल्लामा यति संख्या पुग्यो भनेर जाहेर गर्ने निकाय भएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण भएको कारणले मनपरि बढेको हो । साँच्चै सरकारले निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ नगर्ने मात्रै नाटक मञ्चन गरि नयाँ–नयाँ समिति गठन गरेर दुनियाँको अगाडि छारो हाल्ने कामभन्दा अर्को थोक केही गर्न सकेको छैन । इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो भनेर दाबी गर्ने होभने पहिला निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने अपराधीलाई पक्राउ गरेर देखाउन सक्यो भने, ३३ केजी सुन काण्डका प्रमुख नाइके पक्राउ गरेर देखाउन सके, यातायातको सेण्डिकेट खारेज गरेर देखाउन सके, ठेकेदारको दादागिरी अन्त्य गर्ने सके मात्रै साँच्चै हो यो कठपुतली सरकार हैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बिश्वास गर्ने छन् ।